थुलुङदुधकोशीलाई नगरपालिका बनाइने कार्यपालिकाबाट प्रस्ताव पारित - Solududhkunda Online
थुलुङदुधकोशीलाई नगरपालिका बनाइने कार्यपालिकाबाट प्रस्ताव पारित
- 2021 June 25 मा प्रकाशित
सोलुखुम्बु : थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नती गर्ने प्रस्ताव पारित भएकोे छ । बिहिबार सम्पन्न छैटौँ गाउँसभाले नगरपालिमा स्तरोन्नती गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले जानकारी दिनुभयो ।
यो संगै गाउँपालिका मध्ये जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो रहेको थुलुङदुधकोशी निकट भविष्यमानै नगरपालिका बन्ने भएको छ । साविक सात गाविस मिलेर बनेको गाउँपालिकामा हाल ९ वडा रहेको छ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार यस गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या १९ हजार ७६२ रहेको छ ।
जिल्लामै पहिलो पटक नामङ्कन सहित गाउँपालिका केन्द्र तोकेर आफैले भवन निर्माण गरि सेवा सञ्चालन गरेको यस गाउँपालिकामा सञ्चार, सुविधा उपलब्ध रहेको छ भने वडा नं. १ नेले सम्म पिच सडक रहेको छ । यसै वर्ष गाउँपालिका केन्द्र मुक्ली सम्म कालोपत्रे गर्ने कार्यक्रम रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष राईको भनाई छ ।
हाल सम्म यस गाउँपालिकाको नाममा ५० रोपनी भन्दा बढी जग्गा प्राप्त भईसकेको छ भने सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्माणको चरणमा रहेको जनाएको छ । यस वर्षको असोज देखि ५० शैयाको सुविधा सम्पन्न दुधकोशी सामुदायिक अस्पताल समेत सञ्चालन हुने गरि काम भईरहेको निर्माण समितिका कोषाअध्यक्ष बलराम गुरुङले बताउँनुभयो । उक्त अस्पताल निर्माणका लागि महायज्ञको आयोजना गरिएको थियो । जसबाट रु.११ करोड बजेट संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष राईका अनुसार लक्ष्य प्राप्त भएको छ ।
जिल्लामै पहिलोपटक गाउँपालिका केन्द्र मुक्लीमा लक्ष्मी बैंकको शाखा सञ्चालनमा ल्याएको थुलुङदुधकोशीमा प्रहरी चौकीले समेत आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।
यस्तै जिल्लामै पहिलो खेलग्राम समेत सोही गाउँपालिका केन्द्र नजिकै मैदेलमा निर्माण भईरहेको छ । यस वर्ष कुनैपनि हालतमा उक्त खेलग्राम सञ्चालनमा ल्याउने गाउँपालिका अध्यक्ष राईको भनाई छ । सोही गाउँपालिकामा काँगेल एरपोर्ट रहेको भने एफ.एम. रेडियो समेत सञ्चालनमा रहेको छ । यस्तै एनसेल र नेपाल टेलिकमको रिपिटर टावर मार्फत गाउँको सम्पुर्ण वस्तीमा सञ्चार सेवा पुगेको छ । यस्तै चार वटा साप्ताहिक हाट रहेको गाउँपालिकामा सिभिल इन्जिनियरीङको पढाई समेत गत वर्ष देखि भईरहेको छ ।
वडा नम्बर ९ लोखीममा बालि विज्ञान समेत सञ्चालन भएको गाउँपालिकामा विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रशारण लाईन समेत विस्तारको काम धमाधम भईरहेको भने दुई वटा हाईड्रोपावर निर्माणाधिन अवस्थामा छ । एक घर एकधारा खानेपानीको लागि डिपिआर तयार पारेकाले चाडै स्वच्छ खानेपानी पिउन पाउने अध्यक्ष राईको भनाई छ ।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा नगरपालिका बन्न के के मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ ?
१) दश हजार स्थायी बासिन्दा भएको,
२) पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ भएको,
(३) सडक, सडक पेटी, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार र त्यस्तै अन्य न्यूनतम शहरी सुविधा भएको,
(४) फोहोरमैलाको व्यवस्थापन तथा ल्याण्डफिल्ड साइटको उचित प्रबन्ध भएको,
(५) प्रत्येक वडामा तोकिए बमोजिमको खुल्ला क्षेत्र तथा पार्क उद्यान भएको,
(६) कम्तीमा पच्चीस शैयाको अस्पताल सुविधा भएको,
(७) यात्रु विश्रामस्थल तथा सार्वजनिक शौचालय सहितको बसपार्क भएको,
(८) खानेपानी तथा सरसफाईको व्यवस्था भएको,
(९) बैकं तथा वित्तीय संस्थाको सेवा भएको,
(१०) सामुदायिक भवन तथा सभाहल भएको,
(११) बजार क्षेत्र भएको,
(१२) पशुवधशाला भएको,
(१३) शवदाहस्थल भएको,
(१४) खेलमैदान भएको,
(१५) नगर गुरुयोजना तयार भएको,
(१६) तोकिए बमोजिमका अन्य मापदण्ड पूरा भएको तथा अन्य शहरी सुविधा भएको ।
माथि उल्लेखित अधिकांश मापदण्ड पुरा भईसकेकाले नगरपालिका बनाउने तयारी थालिएको अध्यक्ष राईको भनाई छ ।